1 15 सर्वश्रेष्ठ होटेल र होल्बोवाका, युक्रेन, युक्रेन को कालो समुद्री तट, यूक्रेन, अग्रिम बिना। बुकिंग होटल मिरिववाका
EVEPTATAIशिया होटेलको लागि अनुकूल मूल्यहरू समुद्र नजिकै
समुद्री तटलिटहरू सोची
मिलिटरी "सबै समावेशी" साचीमा 1
कालो समुद्री तट धेरै पर्यटकहरूको मनोरञ्जनको मनपर्ने ठाउँ हो। अनुकूल मौसमवादी अवस्था, प्राकृतिक परिदृश्य र किफायती मूल्यहरू - क्रीयलियाका मुख्य फाइदाहरू।
समुद्री किनारमा प्रायद्वीपको पश्चिममा जीवन्तको पश्चिममा अवस्थित छ। हाम्रो भवन आरामदायक टेरेस र पाहुनाहरूका लागि विविधता क्षेत्रले घेरिएको छ। पहिलो तटनमा अवस्थित अवस्थित छ, लिययन होटेलको सहज तटरमा छ - केवल केही मिनेट पैदल हिड्न र तपाईं आफैंलाई तटमा फेला पार्नुहुनेछ।
मा समुद्री किनारमा सहज होटलहरू:
होटल नजिकै, त्यहाँ सबै आवश्यक रिसोर्ट र शहरी पूर्वाधार - मनोरञ्जन, तटस्थ, तटनहरू असंख्य स्मान्स पसल, क्याफेस र रेस्टुरेन्टहरू सहितको तटस्थता हो। सजिलोसँग, तपाईं शहरको पुरानो केन्द्रमा पुग्न सक्नुहुनेछ, यसको धनी सांस्कृतिक, संग्रहालयहरू र वास्तुकारहरूको साथ।
प्रत्येक कोठामा प्रत्येक कोठामा पोखरी, फ्रिज, वातानुकूलित, वाजिस्टिज, वाजिष्टिज, वानगीयरण, वानगीज छ। हामी यो पनि समुद्रको नजीक अन्य होटलहरूलाई साझा गर्ने अवसर प्रदान गर्दछौं सँधै गर्व गर्दैन।
यदि तपाईं समुद्रको किनारमा इभियेटियामा सबै भन्दा राम्रो होटलहरू खोज्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसपछि लिययन भनेको तपाईंलाई चाहिने ठाउँ हो। हामी हाम्रा पाहुनाहरूलाई केवल उत्तम सर्तहरू मात्र प्रदान गर्दछौं: उच्च स्तर, आरामदायक कोठा, एक महान स्थान। हाम्रो मर्यादामा भाँडा र शेफको कौशलको विस्तृत श्रृंखलालाई सम्बोधन गर्न सक्षम हुनेछ, अन्डा बोरडममा एकल मौका छोडिनेछ।
<< p> प्रणालीमा ठूलो सोचीमा आराम गर्नु राम्रो हुन्छ "सबै समावेशी"? सबै भन्दा राम्रो होटलहरू * *, * * र * * पर्यटक समीक्षामा समीक्षा। सोची रिसोर्टमा 2021 मा मूल्यहरू के छन्? र कहाँ सस्तो आराम गर्ने? पर्यटकहरूले कसरी सबै समावेशी सेवाको बारेमा कुरा गर्छन्? हाम्रो सामग्रीमा पढ्नुहोस्!
अन्तिम मिनेट भ्रमण सेवाहरूको खोजी गर्दैछ - उनीहरूले सब भन्दा राम्रो फेला पार्नेछन् विभिन्न टूर अपरेटरहरू बीच प्रस्तावहरू। बचत गर्न चाहानुहुन्छ? हाम्रो जाँच गर्नुहोस्।
धेरै रूसीहरू कालो समुद्री काकेशियन तटमा वर्षका लागि वर्षमै छुट्टी भएको छ। ठूला सोची पट्टीको रिसोर्ट क्षेत्रको रिसोर्ट क्षेत्रका लागि लगभग 118 किलोमिटरसम्म, र यसले 1 1600 भन्दा बढी बिच क्षेत्र पैदा गर्दछ। लगभग सबै सोची बेचहरू। किनार पर्याप्त चौडा छ, र पानी को प्रवेश कोमल छ। यो जवान बच्चाहरु संग आराम गर्न को लागी धेरै सुविधाजनक छ।
<< p> धेरै पर्यटकहरूले नि: शुल्क शहर बेचहरूमा समय बिताउन रुचाउँछन्। सोचीको क्षेत्रमा, तिनीहरू तीस हुन्। त्यस्ता समुद्री तटमा नियमित सफाई, उद्धारकर्मीहरू काम र मेडिलक्सहरू खुला छन्।
Sandy Bucty Byaches केहि तटीय होटेल संग हो। पर्यटकहरू बालुवा ढाकिएको समुद्री किनारहरू "एबोल्ट्रोस", समुद्री क्षेत्र "," आईरियर क्षेत्र "," MEEISTERS SOCHI, स्वास्तेल सोची केडिया र मस्को समुद्री किनारमा। धेरै छुट्टीहरू सूर्य घाँटीबारी र बालुवा-लोब्रा बीच "रिभरीरा", जुन सोचीको केन्द्रीय भागमा अवस्थित समान हरियो पार्कमा फैलियो।
काकेससको कालो समुद्री तटमा नुहाउने मौसममा अक्टूबको अन्त्यदेखि अक्टुबरको अन्त्यबाट। यी महिनाहरूका लागि, तिनीहरूले सोचीमा आराम गर्न खोजे "सबै समावेशीहरू"। 2021 मा मूल्यहरू उस्तै छैनन्। गर्मीको सुरूमा यात्रा गर्नुहोस् र मखलाईं मौसममा गारी त्रिस्टहरू भन्दा 1 15--35% सस्तो हुन्छन्, जब सबैभन्दा पर्यटकहरू समुद्रमा आउँछन्।
गर्मीको शिखरमा, समुद्री तट रिसोर्टमा हावाको तापमान + 300 डिग्री सेल्सियस र माथिको हुन्छ, र समुद्री पानीमा + +227 डिग्री सेल्सियस बढ्छ स्थानान्तरण गर्न आर्द्रता र दिन तातो सजिलो छैन, त्यसैले धेरै पर्यटकहरू शरद of तु को शुरुआत मा Suchi मा आराम गर्न कोशिस गर्दैछन्। यस समयमा, वायु तापमान घट्ना घट्यो, र समुद्री पानी एक गर्मी तातो मा छ।
अक्टुबरको पहिलो दशकबाट समुद्री किनारमा मौसम। शरदसम्म आँधी समुद्रमा सुरु हुन्छ, र भौचरहरू खस्छ।
places तालिकामा मूल्यहरू रूब्लीमा संकेत गरीन्छ। भौचेकाको लागत अनुमानित हो, र मागको आधारमा, यो निरन्तर परिवर्तन हुँदैछ।